“Istaag, Adigu waad weyn tahay saaxiibkay”… Neymar oo fariin uu ku garab istaagayo la wadaahay Luis Suarez – Gool FM
“Istaag, Adigu waad weyn tahay saaxiibkay”… Neymar oo fariin uu ku garab istaagayo la wadaahay Luis Suarez
Dajiye June 30, 2019
(Brazil) 30 Juunyo 2019. Xiddiga reer Brazil Neymar Jr ayaa fariin uu ku garab istaagayo u diray saaxiibkiis hore kooxda Barcelona ee Luis Suarez, kaddib markii uu ka qasaariyay rigoore kulankii Peru.
Xulka qaranka Uruguay ayaa laga cirib-tiray xalay tartanka Copa America 2019, waxaana gool ku laadyo uga soo adkaatay Peru oo iska xaadirisay wareega xiga afar dhammaadka ee tartankan.
Xulka Uruguay ayaa rigooradii ugu horreysay ay tureen waxaa laga qabtay Luis Suarez halka 4-ta kale ay wada dhaliyeen, laakiin Peru ayaa waxay wada dhaliyeen shantii gool ku laad oo ay tuurteen, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 4-5 rigooreyaal ay ku adkaadeen Peru.
Nasiibka ma uusan u hiilinin xulka qaranka Uruguay iyo Luis Suarez, maadaama qalabka casriga ah ee caawiyaha garsoorka “VAR” uu ka diiday 2 gool ay ka dhaliyeen inta kulanka uu socday.
Hadaba kaddib marka ay ciyaarta soo dhamaatay, Neymar Jr ayaa wuxuu soo dhigay bogiisa rasmiga ah ee Instagram-ka fiidiyoow ku saabsan saaxiibkiis hore ee kooxda Barcelona Luis Suarez, kaasoo ooynayay, kaddib markii uu sabab u noqday in xulkiisa Uruguay uu ku haro wareega siddeed dhamaadka tartanka Copa America 2019.
Neymar ayaa soo raaciyay fiidiyoowgan, qoraal yar uu ku taageerayay Luis Suarez wuxuuna yiri:
“Istaag, waxaad tahay shaqsi weyn walaalkeeyoow, waan ku jeclahay saaxiibkey”.
Paris St Germain oo shaacisay qiimaha lacageed ay dooneyso inay ku iibiso Neymar Jr
“Messi waa ciyaaryahanka ugu fiican taariikhda” - Thiago Silva oo amaan kala dul dhacay Lionel Messi